UMARY JANE WATSON ONGENAKOYISWA YINTSIMBI - BRIAN MICHAEL BENDIS
Iklabhu Yokucheba Iidola
Ngaba uMary Jane Watson usetelwe ukuba ziiPotper ezintsha zePotts kwi-Iron Man engoyikiyo?
Ngaba uTony Stark akanayo ngokwaneleyo ebomvu ebomvu ejikeleze? Kuyo Yonke iNtsha, yahluke kwaphela Indoda engenakoyiswa yintsimbi , umbhali uBrian Michael Bendis kunye nomculi uDavid Marquez bane-Spider-Man kaMary Jane Watson bajoyine iQela le-Iron Man.
Ke kutheni ulongezo olutsha? Kuyabonakala ukuba, ngexesha lokubuyela umlobi okumangalisayo kulo nyaka, u-Bendis wabethwa yinto yokuba akukho mntu ubenezicwangciso zikaMary Jane kwi-Marvel Universe entsha, kwaye xa wayecinga ngayo, waqonda ukuba uyakuba ngumlinganiswa ogqibeleleyo ukubandakanya izicwangciso zakhe ezikhoyo ze-Iron Man. NgokweComic Book Resources , UBendis wayenokuthi oku malunga nesigqibo:
Bayazana. Wayehlala kwiAvengers Tower. Kodwa kuphela kwento endiza kuyithetha okwangoku kuba luhlobo luni lobudlelwane abagqibela ukuba nalo luyinxalenye enkulu yento endifuna abantu bayithengele incwadi. Kodwa into endikuxelela yona kukuba yintsimi entsha kubo bobabini uTony noMary Jane. Kwaye kuyonwabisa ukubhala.
Ndihleli nalo okwethutyana kwaye ndihlala ndisiya kule ndawo isentloko apho [ndizibuza] ukuba yeyiphi eyona nto inomdla ndingathanda ukuyibona yenza lo mlinganiswa ngoku kwaye yawela kanye kwimibono endandisele ndiyiphekela uTony Stark .
Ewe, ukusuka kwisandi sayo, kujongeka ngathi kunokubakho izinto ezithile ezinomdla eziphekelwa uMary Jane, endonwabisa kakhulu. Rhoqo, ndiziva ngathi lo mlinganiswa ujongwa kuphela ngokunxulumene nobudlelwane bakhe bokuthandana noSpider-Man / Peter Parker. Ndiyathemba ukuba ngolu longezo lutsha, uBendis uzakuvumela umlinganiswa ukuba akhanyisele ezinye iimfanelo zakhe - kwaye ngekhe kubekhona naluphi na uxinzelelo lwezesondo phakathi kwakhe noTony, kuba ick. Okokugqibela, ndiyathemba ukuba xa efika, uPepper umnika isihlanu esikhulu kakhulu xa simamkela ebuhlanti.
I-Iron Man engenakoyiswa ngo-Okthobha, kwaye uMary Jane uza kujoyina iqela likaStark kukhuphiswano # 4, oluza kukhutshwa ngoDisemba.
umfanekiso wepary poppins hat
dragon yobudala trespasser unogada okanye isicaka
ixabise malini nes
i-anime nayo yonke intombazana ebunjiweyo
kwenzeka ntoni ukuba utya uthuthu
Ukusuka erussia ngothando lwesigypsy